Arimaha Bulshada – Page 20 – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
November 11, 2016	Leave a comment 38 Views
Madaxweynaha xilka kasii degaya ee Maraykanka Barack Obama ayaa Aqalka Cad ee looga arrimiyo Maraykanka kusoo dhoweeyey Madaxweynaha la doortay Donald Trump. Kulankan ayaa la sheegay inuu qaatay ku dhowaad 90 daqiiqo. Sidoo kale waxaa booqashada ku weheliyey Mr. Trump xaakiisa Melania Trump, waxaana soo dhoweysay Michelle Obama. Dhinaca kalena waxaa halkaasi ka hadlay Mr Trump oo sheegay in ...
Mareykanka oo Qirtay in Duqeyntii uu ka Geystay Mudug uusan Shabaab ku dilin
November 11, 2016	Leave a comment 30 Views
Taliska Mareykanka ee Afrika ku sheegeen in weerarkii lagu qaaday duleedka Gaalkacyo 28-kii bishii September ee sanadkan aanu ahayn mid Al-Shabaab lagu beegsaday, sida ay markii hore Mareykanku ku andacoonayeen. Mareykanka ayaa tilmaamay in maleeshiyo deegaanka aha oo aan Shabaab aheyn weerarkaasi lagu dilay, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. Wasaaradda Gaashaandhiga Mareykanka ayaa horay u sheegtay in ...
”SAWIRRO” Khasaare ka dhashay Rabshadaha ka socda Wadanka Maraykanka
November 10, 2016	Leave a comment 56 Views
Dibed-baxyada looga soo horjeedo Madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ayaa ku sii xoogaystay Wadankaasi Maraykanka. Dibed baxyada ka dhacaya meelaha qaarkood oo ahaa kuwo nabadeed ayaa waxay isu bedeleen kuwo rabshado wata oo ay fooda isku dareen dad careysan iyo Booliska, waxaana la gubay gaadiid iyo dhismayaal. Shan qof oo ka tirsan dibed-baxayaasha diidan madaxweynaha la doortay ayaa ...